Duqeyn Lala beegsaday hal qoys duleedka magaalada Kismaayo | SAHAN ONLINE
Duqeyn Lala beegsaday hal qoys duleedka magaalada Kismaayo
KISMAAYO – Ugu yaraan 3 qof ayaa geeriyootay,halka 4 kalena ay dhaawacmeen kaddib markii duqeyn lala beegsaday hal qoys ah gurigooda meel 25 km koonfur kaga beegan deegaanka Kaamajaroon ee duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo.
Todobada qof ee ay waxyeeladu soo wada gaartay ayaa ah hal qoys oo xoolo dhaqato ahaa.
Afarta qof ee dhaawaca ah oo ay ku jiraan laba cunug oo yar yar ayaa la gaarsiiyay Isbitaalka magaalada Kismaayo oo lagu daaweynayo.
Xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada galbeedka Jubbaland ayaa arrintan si weyn walaac uga muujiyay,iyadoona duqeyntan ay si weyn ugu soo noqnoqtay dhulka baadiyaha ah ee saddexda gobolka ee maamulka Jubbaland.
Xildhibaan Iftiin Xassan Baasto oo kasoo jeeda deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ayaa VOA u sheegay in ay ugu baaqayaan ciidamada ajaanibta ah ee duqeynta geysta in ay kala saaraan dadka rayidka ah iyo kooxaha ay beegsanayaan ee Al-Shabaab ka tirsan.